Ergooyinka Soomaalida ah ee ka qayb galaya Shirka Kenya oo qaarkood laga saaray Hoteeladii ay daganaayeen.
Dawladda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia, oo sheegtay inay diyaar u tahay ka qayb qaadashadda Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida.
Dawladda Kenya oo ugu baaqday Kooxaha Soomaalida ee ku maqan Gudaha Dalka inay ugu dambayn ku yimaadaan Nairobi Maalinta Jimcaha ee Bariya.
Ingiriiska oo sheegay inay Somali Land ka taageerayaan Dagaalka ay kula jirto Kooxaha Mayalka Adag.
Golaha Ammaanka ee Afrika oo sheegay inay Cunaqabatayn saarayaan Hogaamiyihii Carqaladeeya Shirka Soomaalida uga socda Kenya.
Wasiirka Gaashaandhiga ee Jarmalka oo ku soo fool leh Jabuuti Billawga Bisha June.
Iyadoo lagu guda jiro Wajigii Saddexaad ee Shirka Soomaalida uga socday Kenya ayaa waxaa laga saaray qaar ka mida Ergooyinkii ka qayb galayay Shirka Hoteeladii ay daganaayeen.
Ergooyinka Soomaalida ah ayeey Milkiilayaasha Hoteeladda u sheegeen inuu dhamaaday qarashaadkii loogu talagalay. Isla markaan ay daymo farabadan ku leeyihiin Dawlada. Sidaas darteedna waxay ku amreen inay Boorsooyinkooda kala baxeen Hoteeladda. Waxaana la sheegay in Qaar ka mida Ergooyinka ay Xalay dajiyeen Goobo ay seexdaan Soomaalida ku nool Xaafadda Islii ee Magaaladda Nairobi.
Xasan Abshir Faarax oo ka mida Ergooyinka Soomaalida ah ee ka qayb galaysa Shirka Kenya ayaa sheegay inay ayaan darro tahay in Soomaalida laga saaro Hoteeladdii ay daganaayeen xilli uu shirkuba gabagabo yahay. Wuxuuna sheegay in Sababta looga saaray Soomaalida ay uga wacan tahay Deeq bixiyayaasha Shirka Maalgalinaya oo aan bixin dhaqaalihii ay ballanqaadeen in lagu socodsiiyo Shirka Soomaalida.
Xasan Abshir waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in isaga iyo Cabdalla Deeroow laga saaray Hoteeladdii ay daganaayeen. Wuxuuna sheegay inuu isagu shaqsiyan wali dagan yahay Hoteelkii uu daganaa. Laakiin waxa uu sheegay in Cabdalla Deeroow uu ka mid yahay Ergooyinka Soomaalida ah ee degan Mbagathi. Sidaas darteedna waxa uu sheegay inay faafiyeen wararkaasi dad jecel xumaanta.
Mar la waydiiyay Xasan Abshir doorkiisa ku aadan Shirka Soomaalida waxa uu sheegay inuu dhamaaday Xilligii Is Kooxaysiga Siyaasadda. Isla markaana loo gudbay Hanaankii Beelaha. Wuxuuna sheegay in Shaqsi kastaa uu ka daba faylayo Beeshiisa. Sidaas daraadeedna uu ku gawracan yahay Saamiga ay Beeshiisu ka hesho Soomaali dhexdeed.
Shirka Soomaalida oo galay Marxaladii ugu dambaysay ayaa laga yaabaa in ka saarista Ergooyinka ee Hoteeladdu ay qayb ka tahay qorshe la doonayo in lagu dhimo Tiradda Ergooyinka ka qayb galaysa Shirka Kenya.
Dawladda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia, ayaa si rasmiya u sheegtay inay ka qayb galayso Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida oo Toddobaadkan ka furmay Magaaladda Nairobi ee Dalka Dalka Kenya.
Ra�iisul Wasaaraha Xukuumadda Ku Meel Gaarka ah ee Soomaaliya. Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka hadlayay Shir Jaraa�id oo uu ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay inay ka qayb galayaan Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida. Wuxuuna sheegay inay Xukuumaddu ka tanaasushay Shuruudihii hore ee ay ku xiray Shirka Kenya oo uu ka mid ahaa Baasaboorka Soomaaliga oo ay Dawladda Kenya mamnuucday in Dalkeeda lagu soo galo.
Tanaasulkan ayaa yimid kadib kulan ay shalay yeesheen Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda Ku Meel Gaarka ah. Isla markaana loogu soo gudbiyay qoraal uu Urur Gobaleedka IGAD u soo diray TNG-da. Iyadoo horayna uu Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Ku Meel Gaarka ah. Yuusuf Dheeg uga sheegay Tunisia inuu Madaxwayne C/qaasim tagayo shirka Soomaalida.
Dawladda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia, ayaa la xaqiijiyay inay uga qayb galayso Wajiga Saddexaad ee Shirka qaab beeleed. Waxaana la sheegay in siyaasiyiintu ay ku dabafaylaan Beelahooda isla markaana uu dhamaaday Jiritaanka Isbahaysiyadda Siyaasadeed.
Imaaraadka Carabta oo Soomaaliya ugu deeqday lacago wax looga qabanayo Biyaha Wasaqaysan ee laga cabo Koonfurta Soomaliya.
Imaaraadka Carabta ayaa ugu deeqday Soomaaliya 2 Milyan oo Doolar kadib markii uu heshiis dhex maray Mu�asasadda Samafalka ee Shiiq Zayid iyo Hay�adda UNDP ee Qaramadda Midoobay.
Deeqdan ayaa la qorsheeynayaa in wax looga qabto Nadiifinta Biyaha laga cabo Koonfurta Soomaaliya oo aad u liita. Waxaana la hagaajinayaa Illaha ay Biyaha ka helaan dadka ku dhaqan Koonfurta Soomaaliya. Iyadoo dadka la gaarsiinaya Biyahan Nadiifka ahna ay yihiin dadka ka soo barakacay Gobaladda ay Dagaaladdu ka socdaan. Iyo Gobaladda Abaaruhu ay halakeeyaan.
Deeqdan ayaa sida la sheegay waxaa amray Hogaamiyaha Imaaraadka Carabta, Shiiq Zayid Bin Suldaan Aalla Nahyaan. Kadib markii uu arkay dhibaatadda haysata Shacabka Soomaaliyeed ee Abaaraha iyo Dagaaladdu halakeeyeen. Sida laga soo xigtay Sii Hayaha Agaasimaha Mua�asasadda Sheikh Zayid ee Samafalka. Saalim Qubayd Al-Daahiri.
Mashruucan oo ah kii ugu horeeyay ee ay labada Hay�adood wada fuliyaan ayaa wax wayn ka tari doona Dhibaatadda Biyo Xumo ee haysata Dadka Soomaalida ah oo la rumaysan yahay in Boqolkiiba 80 ay isticmaalaan Biyo aan Nadiif ahayn.
Dawladda Kenya ayaa ugu baaqday Hogaamiyayaasha Kooxaha Soomaalida ee aan imaan Madasha Shirka Soomaalida inay ugu dambayn ku yimaadaan Nairobi Maalinta Jimcaha ee nagu soo aadan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay inay IGAD u soo gudbisay in Jimcaha ay ku keento Tiradda ugu dambaysa ee Hogaamiyayaasha iyo Odayaasha Dhaqanka ee ku maqan Gudaha Soomaaliya. Waxayna Wasaaraddu sheegtay inay soo daad guraynayso Dadka Soomaalida ah ee aan looga maarmin Wajiga Saddexaad ee Shirka. Isla markaana ku maqan Gudaha Soomaaliya.
Dhinaca kale Madaxa Ergadda Midowga Yurub uga qayb galayso Shirka Soomaalida, Carlo Ungaro aya ugu baaqay Beesha Caalamka inay dar dar galiso hanaan socodka Shirka Kenya. Wuxuuna sheegay in shirku uu marayo Marxaladii ugu dambayso ee Dhismaha Dawlad Soomaaliyeed. Sidaas daraadeedna ay lagama maarmaan tahay in taageero hagar la�aaneed la siiyo Shirka Kenya.
Ungaro waxa uu sidoo kale Tallaabo yididiilo leh ku tilmaamay in Soomaalidu laf ahaanteedu ay yeelato Guddoominta Shirka uga socda Kenya, Wuxuuna Soomaalida ka dalbaday inay muujiyaan Tanaasul dheeriya si shirku u mira dhalo.
Beesha Caalamka iyo Urur Gobaleedka IGAD ayaa xilligan dadaal dheeriya ugu jira inay soo afjaraan Wajiga Saddexaad ee Shirka Soomaalida. Waxaana ay cadaadis ku saarayaan Kooxaha Soomaalida inay meel iska dhigaan Khilaafaadka u dhaxeeya.
Dawladda Ingiriiska ayaa markii ugu horaysay Ballanqaaday inay Maamulka Somali Land gacan ka siinayo waxa loogu yeeray la dagaalanka Argagixisadda Geeska Afrika.
Afhayeenka Madaxtooyadda Somali Land. Cabdi Idiris Ducaale ayaa sheegay in Ingiriiska uu ka taakulaynayo Somali Land dagaalka ay kula jirto Argagixisadda Gobalka. Waxaana uu afhayeenku sheegay in ballan qaadkan uu yimid kadib kulan ay Hargayso ku yeesheen Madaxda Somali Land iyo Saraakiil ka socota Waaxda La Dagaalanka Argagixisadda ee Britain oo socdaal ku jooga Deegaanadda hoos tagga Somali Land.
Wafdiga Ingiriiiska oo kulan la yeeshay Daahir Riyaale ayaa sheegay inay Britain ka caawinayso Maamul Gobaleedka Somali Land arrimaha Nabadgalyadda iyo La dagaalanka Argagixisada. Waxayna ku ammaaneen Maamulayaasha Somali Land doorkii ay ka qaateen la dagaalanka Argagixisadda.
Madaxa Wafdiga Ingiriiska. Mr Roger ayaa sheegay inay Somali Land taakulayn dhaqaale iyo Mid Farsamaba ka siinayaan Ciribtirka Kooxaha Mayalka Adag. Wuxuuna ka dalbaday Maamulayaasha Somali Land inay sii xoojiyaan Baaritaanka ay ku hayaan labadii Muwaadin ee Ingiriiska ahayd. Isla markaana lagu dilay Somali Land.
Golaha Ammaanka iyo Nabadgalyadda ee Midowga Afrika ayaa shaaca ka qaaday inay ka go�antahay sidii ay cunaqabatayn ugu soo rogi lahaayeen Hogaamiye Kooxeed kasta oo carqaladeeya Hanaanka uu ku socda Shirka Soomaalida ee Kenya.
Sarkaal Sare oo ka tirsan Golaha Ammaanka Afrika ayaa u sheegay Shabakadda Mohet inay cunaqabatayn dhinac walba leh ku soo rogi doonaan Madaxda Maleeshiyooyinka carqaladeeya Shirka Soomaalida uga socda Kenya. Wuxuuna sheeagay in Tallaabooyinka adag ay ka qaadin doonaan Kooxaha Soomaalida ah ee doonaya inay fashiliyaan Geedi Socodka Nabadda Soomaliya.
Sarkaalkan waxa uu sheegay in Tallaabooyinka ay ka qaadayaan Hogaamiyayaasha diida Shirka Kenya inay ka mid noqon doonto in lagu soo roggo Xayiraad dhinaca Socdaalka ah. Iyo in la xanibo Hantidiisa u taala Baananka Caalamka. Wuxuuna sheegay in hirgalinta Cunaqabatayntaasi ay la kaashan doonaan Golaha Ammaanka ee Qaramadda Midoobay.
Sarkaalkan waxa uu sidoo kale sheegay in Shirka Soomaalida uga socda Kenya inuu gaaray horumar la taaban karo. Isla markaana ay Kooxaha Soomaalida intooda badan xaadir ku yihiin Magaaladda Nairobi oo uu ka socdo Wajigii Saddexaad ee Shirka. Wuxuuna sheegay in inta maqana aan illaa iyo hadda laga hayn Diidmo ay ka muujiyeen Shirka. Sidaas daraadeedna uu Golahoodu rajaynayo inay ku soo biiraan Saaxiibadooda ku sugan Nairobi.
Wasiirka Gaashaandhiga ee Jarmalka, Mr Peter Jatarock ayaa la filayaa inuu booqdo 5 Bisha June Ciidamadda Jarmalka ee ka qayb qaadanaya Illaalinta Xeebaha Soomaaliya iyo Dalalka la deriska ah.
Mr Peter ayaa la filayaa inuu lugta ugu horaysa ee socdaalkiisa ka billaabo Dalka Jabuuti oo fariisin u ah Ciidamo fara badan oo reer Galbeed ah isla markaana uu Jarmalku ka mid yahay. Waxaana la filayaa inuu kula kulmo Jabuuti Madaxda Dalkaasi iyo Saraakiisha hogaaminaysa Ciidamada Jarmalka ee la dagaalanka Argagixisadda Geeska Afrika.
Socdaalka Wasiirka ayaa ah mid dhiiragalin ah oo looga gol leeyahay in Ciidamadda Jarmalka ee ku sugan Geeska Afrika lagu dhiiragaliyo inay sii laban laabaan Doorkooda la dagaalanka Argagixisadda Gobalka Geeska Afrika.